Wednesday December 05, 2018 - 06:59:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo aad uhubeysan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa ka hor tagay weerar habeen dheelmada ah oo ciidamo Mareykan iyo Soomaali ah ay ku qaadeen degmada Awdheegle ee Sh/Hoose.
Wararka ka imaanaya degmada Awdheegle ayaa sheegaya in dagaallo culus ay xalay saqdii dhexe ku dhaxmareen ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa soo duulayaasha Mareykanka oo ay la socdeen maleeshiyaad dabadhilifyo Soomaali ah.
Sida ay noo sheegeen dadka deegaanka xalay saqdii dhexe ayay ciidamada huwanta ah diyaarada kusoo degeen duleedka degmada Awdheegle kadibna iyagoo lugeynaya ayay qaab Infenteri ah ku galeen magaalada balse mar qura ayay xabaddu meel walba uga bilaabatay.
Sida muuqata xoogaga Al Shabaab oo lasocday dhaq dhaqaaqa ciidamada Americanka ayaa dabin adag u dhigay huwanta taas oo keentay in khasaare lixaad leh uu kasoo gaaro dagaalka ayna ku fashilmaan qorshihii ujeedka weerarkooda.
"Mujaahidiintu si adag ayay isaga difaaceen weerar ay ciidamo saliibiyiin Mareykan ah iyo maleeshiyaadka Murtadiinta Bangaraafta kusoo qaadeen degmada Awdheegle ee wilaayada islaamiga Sh/Hoose, Alle Mahaddiis gaaladu waa ku fashilmeen ujeedkii weerarkooda mujaahidiintuna dharbaaxo adag ayay ku dhufteen markii damabana waxay maciin bideen duqeymo xagga cirka ah iyana wax khasaara ah kamasoo gaarin muslimiinta" ayuu yiri sarkaal u hadlay Al Shabaab.
Ilo wareedyo ayaa SomaliMeMo u xaqiijiyay in dagaalka ugu culus uu ka dhacay agagaarka saldhigga Booliska degmada halkaas oo aheyd meeshii ay cagta soo dhigeen ciidamada huwanta ah.
Dagaal muddo socday kadib ayay ciidamada Mareykanka iyo maleeshiyada Bangaraafta ka firxadeen magaalada iyagoona xabaddu ku socotay, daqiiqado kadib waxaa hawada Awdheegle soo galay diyaarado kuwaas oo qaab raacda reeb ah laba gantaal ugu duqeeyay gudaa magaalada.
Gantaalka koowaadka ayaa ku dhacay suuqa weyn ee degmada halka gantaalka kale uu ka dhacay xaafadda Caanoole balse majirin wax khasaara nafeed ah oo ka dhashay duqeymaha marka laga reebo burbur gaaray dhismayaashii ay duqentu beegsatay.
Saaka markii uu waagu baryay ayaa goobihii lagu dagaallamay lagu arkay dhiig daadsan iyo haraadiga qalab caafimaad sida faashado waxaana loo malaynayaa in ciidamada Huwanta ah uu khasaaro kasoo gaaray dagaalkii xalay.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada Mareykanka iyo Maleeshiyaadka Bangaraafta iyagoo dhimasho iyo dhaawacyo wata ay dib ugu laabteen garoonka diyaaradaha Balidoogle oo markii hore ay kasoo duullaan tageen.
Bilo ka hor ayay aheyd markii sidaan oo kale ay weerar fashilmay ugu qaadeen deegaanka Mubaarak oo qiyaastii 8Km dhanka galbeed uga beegan Awdheegle, sidoo kale sanaddii 2017 weerar habeen dheelmad ah oo ciidamada Mareykanku ku qaadeen deegaanka Daarusalaam ayaa looga dilay sarkaal sare oo American ah kaas oo kamid ahaa saraakiishii ka qeyb qaadatay howlgalkii lagu dilay Sheekh Osama Bin Laden sanaddii 2011.
Dadka odorosa arrimaha melleteriga ayaa sheegaya in dhiifanaanta dagaalyahannada Al Shabaab melleteri ahaan iyo sirdoon ahaan ay waxba kama jiraan ka dhigtay weeraradii habeen dheelmadka ahaa ee ay qaadi jireen ciidamada huwanta ah ee Soomaaliya kusoo duulay waxaana hoos udhacay tirada weerarada marka loo eego sida ay ahaayeen sanadadii hore.